I-4 INTSHI YE-BACKSPLASH PROS KUNYE NE-CONS - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-4 intshi ye-Backsplash Pros kunye ne-Cons
Apha sabelana nge-4-intshi ye-backsplash pros kunye neengozi kubandakanya eyona mibuzo ithandwayo malunga nokufakwa kunye nokususwa.
I-backsplashes yekhitshi zizinto ezithandwayo zoyilo kungekuphela kwesibheno sabo sobuhle kodwa nokusebenza kwabo ngokunjalo. Ziyanceda ukukhusela iindonga zekhitshi lakho ekutshizeni ukutya kunye negrisi kunye nokucoca ngokulula.
Isibheno sobuhle asifanelanga ukuba singaphantsi. Ngokuzama izinto, iipateni, kunye nokuphakama, unokwenza iziphumo ezizodwa ezibonisa ukuthanda kwakho kunye nobuntu bakho. Ukuba ucinga ukufaka ifayile ye- ukubuyela umva ekhitshini ekhayeni lakho, ezi zizinto ekufuneka uzazi.
I-4-intshi yeGranite Backsplash eneTayile apha ngasentla
Uyihlaziya njani i-4-Inch Backsplash yakho
4-Inch Backsplash FAQs
Ungasusa i-4-intshi yeGranite Backsplash?
Uyisusa njani i-Glued Down Granite?
Ngaba ii-4-intshi zokubuyela umva ziphelelwe lixesha?
Iphakame Kangakanani i-Granite Backsplash?
I-4-intshi yegranite backsplash lukhetho oluqhelekileyo. Enye yeenzuzo eziphambili kolu luphakamo lusezantsi kukuba ikunika indawo eninzi yokusebenzela ngaphezulu kwe-backsplash. Oku kunokuthi, kunjalo, kube ludonga olungenanto olupeyintwe ngobumnandi obuncinci okanye inokuba yinto eyakha ngakumbi.
Enye yeendlela zokukhetha onazo kukusebenzisa ipateni yethayile ngaphezulu kwe-backsplash yakho. Olu lukhetho olunomdla kuba likuvumela ukuba udlale ngemilinganiselo emininzi. Endaweni yokuthintelwa ekutshintsheni umbala wethayile, le nto iya kongeza ubume kule ndawo, iyenze ibe namandla ngakumbi ngokubonakalayo. Funda ngakumbi malunga uyifaka njani i-backsplash yethayile Apha.
Ukugcina i-backsplash yakho ijonge phezulu kwaye inomdla nje ngomhla owawungenise ngawo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyigcina kwaye uyayihlaziya ngamanye amaxesha.
Ukuqala, uya kufuna ukugcina ulondolozo rhoqo lwegranite njengokugcina izinto zicocekile. Iindaba ezimnandi zezokuba igranite yaziwa ngokuba yinto elula ukuyicoca, ke awunakukhathazeka ngokudibanisa nomsebenzi omninzi kwindlela yakho yemihla ngemihla neyeveki. Ngokubanzi, ungasebenzisa amanzi afudumeleyo ngesepha ethambileyo exutywe ukujongana nobunzima obukhulu. Kuyanceda ukucoca ubumnandi obukhulu kwakamsinya nje ukuba zenzeke. Funda ngakumbi malunga indlela ukucoca lenyengane Apha.
Ukongeza i-backsplash eyahlukileyo ngaphezulu kwe-backsplash ekhoyo ye-4 intshi ngumbono othandwayo. Ungaya noyilo olwahlukileyo okanye uzame ukutshatisa okhoyo. Unokutshintsha kwakhona i-backsplash yakho ye-granite ukuba izinto ezikhoyo azivumelani nobuhle obutshintshayo okanye zifuna nje ukuhlaziywa. Siza kufumana ngakumbi indlela yokwenza oku ngomzuzwana.
Ewe ungayisusa i-granite backsplash. Kuba igranite ayithathwa njengesixhobo esibuthathaka, isidingo sokususa izinto zihlala zikhawulelwe kutshintsho lokhetho kwiminqweno yomninikhaya okanye ukufuna ukuzama into entsha.
Ukususa i-granite backsplash ayingomsebenzi onzima nokuba. Siza kuthatha ukujonga kufutshane, inyathelo nenyathelo ngendlela yokususa le backplash ngomzuzwana kodwa kuthatha izixhobo ezimbalwa kakhulu kunye nesakhono esincinci sobugcisa ukugqibezela. Oku kuthetha ukuba ayizukuthatha ixesha elininzi okanye ibe ngumsebenzi onoxinzelelo ngokungeyomfuneko ukujongana nawo.
Ukuba uthathe isigqibo sokususa okanye ukubuyisela umva kwi-granite backsplash yakho, kuya kufuneka uyazi ukuba ungayenza njani loo nto. Ngethamsanqa, le nkqubo ayinzima njengokuba isenokuvakala ekuqaleni. Nangona kunjalo, uya kufuna ukulumka ukuqinisekisa ukuba awonakalisi udonga olungezantsi.
Ngumbono olungileyo ukuqala ngokubeka into efana nephephandaba phantsi kwekhawuntari ukubamba nakuphi na ukungcola ngelixa usebenza. Emva koko, uya kufuna ukusebenzisa isixhobo esinjengebhokisi imela ukusika i-caulk kunye nokucheba ngaphezulu kwe-backsplash nakwindibaniselwano apho ihlangana khona ne-countertop.
I-backsplash ayisiyi kuwa nje ngeli xesha. Ke, uyakufuna imela yokubeka ukuze usebenzise i-backsplash eludongeni. Oku kufuneka kwenziwe ngobunono. Ngaphandle koko, uya kugqiba ukukrazula kunye nokonakalisa udonga kwinkqubo.
Akuqhelekanga ukuba nakwizandla zezandla ezilumkileyo zisenodonga olonakele kancinci emva kokuba isuswe igranite. Ungalungisa ngokulula nayiphi na imingxunya okanye umonakalo obonakalayo ngesixhobo esomileyo sokuqhawula indawo.
Olunye uloyiko uninzi olunalo xa kufikwa kwi-4-intshi yegranite backsplash kukuba umxholo uphelelwe lixesha. Nangona kunjalo, oku kukude nenyaniso. Ngelixa isitayile siphantsi komlilo kule minyaka idlulileyo ngenxa yokubonakala kwayo komhla, unokuyenza ngokulula i-backsplash yakho ukuze uyinike imbonakalo eyahlukileyo kunye entsha.
Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo onokukwenza ngazo oku. Umzekelo, ukuba unayo imali eyongezelelweyo, unokuhlala ukhetha i-countertop yokunethezeka. Oku kukwathetha ukuba ungawutshintsha umva umbandela wokubuyela umva ngokwawo ukusuka kwi-granite uye kwinto yanamhlanje efana nesinyithi okanye i-shiplap.
Ngaphandle koko, bhangqa i-backsplash yakho ye-4-intshi kunye namacandelo e-backsplash epheleleyo yokwahluka okuncinci. Indlela eyaziwayo yokwenza oku kukusebenzisa i-backsplash ye-4-intshi kwi-countertops kwaye ufake i-backsplash epheleleyo emva kwesitofu nangaphantsi kwebala.
Ekugqibeleni, i-backsplash yale ndlela isamkeleka ngokugqibeleleyo kwaye ayisiyonto yoyilo ilahlekileyo kwimbali. Ihlala ikhetho olukhangayo ekhitshini lakho.
I-granite backsplash eneesentimitha ezine ubude lukhetho oluthandwayo ekhitshini kodwa, njengoko bekutshiwo ngaphambili, ayisiyiyo kuphela ukuphakama okukhethiweyo onakho. Endaweni yoko, ukhetho luhlala luye ezantsi ukuba ufuna i-backsplash epheleleyo okanye i-intshi enye okanye enye ibe yi-intshi enye. Ngamanye amaxesha, olu khetho luye lusetyenziswe kwi-tandem ukwenza uyilo oluguquliweyo oluvela kumbono oqhelekileyo wegranite backsplashes.
Kukho ubuchule kunye nobubi bokusebenzisa iindawo ezahlukeneyo zokuphakama kwegranite, nangona kunjalo. Ukuba usebenzisa i-backsplash ye-4-intshi, enye, unegumbi lokuhombisa udonga olungaphezulu kwento ebuyela umva ukuba uyafuna ngelixa isplash epheleleyo itya lonke udonga. Kwelinye icala, ukubuyela umva ngokupheleleyo kukhusela ngakumbi. I-4-intshi ye-backsplash ishiya indawo ethe kratya yokutya okanye igrisi ukubetha eludongeni. Esi sizathu esikhulu sokuba i-backsplashes epheleleyo ithandwa ngaphezu kwezitofu.
Eyona nto iphantsi kakhulu kwi-backsplash epheleleyo kukuba ibiza kakhulu. Emva kwayo yonke loo nto, kukusetyenziswa kwezinto ezininzi kunokubuyela umva ngomfutshane okwenze ukuba kubize kakhulu ngokwemvelo. Ukuyilwa okungaphezulu okunxulumene nokujonga igalari yethu malunga izitayile zangaphantsi kwetayile yokubuyela umva izimvo .
uyinxiba phi iringi yakho yomtshato
uhlawula malini umcwangcisi womtshato
Izipho ezilungileyo zomtshato zabazali
4 ubungakanani begaraji yemoto
izipho zomtshato wokuqala kuye
Iivenkile zejay ziphakamise isithembiso segolide
indlela yokulahla amabala amnyama kumgca we-bikini